Ogaden News Agency (ONA) – Masuulka Ugu sareeya UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay oo canbaareyn kulul usoo jeedisay Taliska Ethiopia
Masuulka Ugu sareeya UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay oo canbaareyn kulul usoo jeedisay Taliska Ethiopia
Masuulka ugu sareeya Qaramada Midoobay qeybta Xuquuql Insaanka Nevi Pillay oo ah (UN Rights Chief) ayaa kusoo biirtay soojeedinta eedeymaaha aadka u kulul ee faraha badan iyo walaaca badan ee laga qabo Taliska Itoobiya sida ay ugu tuntaan uguna xadgudbaan xuquuqda Bani aadamka Shacabka ku nool Ethiopia. Masuulka ugu sareeya UN High Commissioner for Human Rights ayaa sheegtay inay walaac badan ka muujinayaan aadna Qaramada Midoobay uga xunyihiin sharciyada wadanka Ethiopia soo dajisteen ee lagu gumaadayo shacabka iyada oo laga hortagayo Saxaafada xorta ah. Waxay sheegtay in Wadanka Ethiopia Haayadihi Samafalka ahaa oo dhan albaabada loo laabay oo aysan kajirin hal haayad oo xuquuql insaanka ka hadli karta iyo ‘Political rights’-ka midna. midaas oo aan loo dulqaadan karin murugo badana nagu heysa.
Waxaa dhowaan Magalada Addis Ababa Taliska TPLF ay ku xukumeen muwaadin u dhashay Dhulka Somalida Ogadeniya oo kamid ahaa Masuliyiinta Haayadaha UN-ta ee ka howlgala wadanka gudihisa isaga oo xabsi muddo dheer ah lagu xukumay. Sidoo kale waxaa laxidhay oo sharcigaas oo kale lagu qaaday suxufiyiin badan oo Ethiopian ah.
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadama Europe ayaa muddo dheer ka cabanayay tacadiyada ay gumeysiga Ethiopia ka geystaan dhulka Ogadeniya iyo guud ahaanba shacabka hoos taga Gumeysiga Ethiopia sida Oromada. Waxaana cabashooyinkaas loo gudbiyay Haayadaha UN-ta ee saldhigoodu yahay Geneva iyo midowga Europe. Iyaga oo banaanbaxi ugu danbeeyay ku horqabtay Bishii May iyo June ee lasoo dhaafay magaalada Geniva iyo Brussel siday u kala horeyaan.
Hadaba qaraarka kasoo baxay UN Rights Chief waxa uu sii xoojiyay Kulankii 51aad ee 18 April – 2 May 2012 lagu qabtay guriga Qaramada Midobay ee Geneva oo fadhigaas lagu soo saaray qaraaro ka dhan ah Gumeyisga Ethiopia. Halkaas oo the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) ay soo saareen qaraar sheegaya oo lagu eedeynayo Taliska Ethiopia oo lagu sheegay in uu xidhay dad badan oo suxufiyiin ah iyo Mucaaradbadan oo Siyaasiyiin ah, isaga oo kusoo oogay kiisas argagaxnimo oo been abuur ah si looga qaado xoriyadooda.
Waxaad mooda in caalamku dhagahiisa furay una soo jeedsaday in si toos ah loo eedeyo Gumeysiga Ethiopia, iyo falalkisa xun. Balse Ficilka larabo in laga qaado Gumeysiga ayaa wali dunida caalamku ku talaabsanin. si taas ay u timaado waxa lagama maar maan ah Halganka Shacabka Somalida Ogadeniya ku jiraan in lasii laba jibaaro iyo kasbashada mucaaradka faraha badan ee Jabhada ONLF ka hirgalisay Gudaha Iyo Dibada Ethiopia intaba. Mucaaradka Ethiopia oo ka kooban Axmaaro, Oromo, Benshangul, gambella, Canfar, iyo kuwo kale oo badan ayaa waxa si xoogan ay isugu bahaysteen in laga tuuro taliska TPLF. Mmucaradkan ayaa Jabhada ONLF muddo dheer ay ka shaqeynaysay sidii ay u abaabuli laheyd ugu danbeyntina waa lagu guulaysatay lakiin wali shaqo badan ayaa laraba mucaradkaas Etiopia inay hirgaliyaan. si caalamku talaabo ficil ah uga qaado gumeysiga Ethiopia.
Linkigan ka aqri Warbixinta UN-ta oo 19 July 2012 soo baxday kuna qoran webka Officialka ah ee UN-ta.